Fanentanana fizahan-tany 'Fantasy' vaovao Go Vilnius
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Fanentanana fizahan-tany 'Fantasy' vaovao Go Vilnius
pikantsary 2020 02 04 amin'ny 14 41 41 3
Vilnius, renivohitr'i Lituania ary toerana itadiavan'ny hetsika "Vilnius - ilay faritra G-Eropa", nahazo ny loka, dia manao fanentanana vaovao izay mikendry ny hibolisatra amin'ny haiziny manokana eo amin'ireo toerana fivezivezena manerantany.
Manaraka ny dian-tongotra nahazo loka
Ny fampielezan-kevitra vaovao, 'Vilnius: Mahagaga na aiza na aiza noeritreretinao,' dia hanaraka ny fomban'ilay fampielezana loka "Vilnius - ilay toerana G any Eropa", izay nanambara fa "tsy misy mahalala hoe aiza io, fa rehefa ianao tadiavo, mahavariana. ”
Nanjary lohateny lehibe ny fanentanana, ary notondroina ho fanentanana dokambarotra tsara indrindra tamin'ny International Travel & Tourism Awards avy amin'ny World Travel Market any London.
Fanentanana atosiky ny angona
Ny hevitra hampiasa ny tsy fahaizan'ny tanàna ho fitaovana hisarihana mpizahatany betsaka dia tohanan'ny data ihany koa. Raha ny fanadihadiana natao tamin'ny taona 2019, nataon'i Go Vilnius, masoivoho fampandrosoana ofisialin'ny tanàna nanomboka ny fampielezan-kevitra, dia 5% monja amin'ny Brits, 3% ny Alemanina, ary 6% israelianina no mahalala mihoatra ny anarana sy ny toerana manodidina an'i Vilnius. .
A tranokala natokana ho an'ny fampielezan-kevitra dia hanontany ny mpitsidika haminavina hoe aiza i Vilnius raha te handresy fitsangatsanganana an-tanàna izy ary ampahafantarina azy ny antony marobe mahatonga an'i Vilnius hahagaga. Ny fampielezan-kevitra dia hanisy clip video mampiseho ny mponin'i Berlin mametraka an'i Vilnius na aiza na aiza manomboka amin'ny Amerika ka hatrany Afrika.
Haparitaka amin'ny alàlan'ny sehatra an-tserasera ity horonantsary ity miaraka amin'ireo fanentanana dokam-barotra amin'ny tsena kendrena sy ireo haino aman-jery voafantina. Ary farany, ny takelaka fisoratana anarana any Londres, Liverpool ary Berlin dia haneho an'i Vilnius sary an-tsaina indray amin'ny tontolo nofinofy isan-karazany. Ny fampielezan-kevitra dia hisy koa ny fanandramana traikefa pop-up Vilnius any London amin'ny 22 martsa.
Toerana kendrena mialoha
Raha ny filazan'ny talen'ny Go Vilnius, Inga Romanovskienė, dia ny hamadika ny fadiranovana eto an-tanàna amin'ny maha renivohitra eropeana tsy fanta-daza azy ho fanentanana mampiala voly sy mahafinaritra, izay ihomehezan'i Vilnius ny zava-miafina ao.
“Vilnius dia manohy ny fampisehoana ny tenany ho toy ny tanàna mora nefa sahisahy, tsy matahotra mihomehy ny lesoka ary miala amin'ny fanao sasany. Ny tanjonay dia ny hampisehoana fa na aiza na aiza toerana iheveran'ny olona fa misy an'i Vilnius, dia toerana tsara hitsidihana izany, "hoy Rtoa Romanovskienė.
Ny fampielezan-kevitra "Vilnius: Mahagaga Na aiza na aiza noheverinao fa misy" dia natomboka tamin'ny Alatsinainy faha-3 Febroary.
Mpanakanto Portiogey Santiago Ribeiro fampirantiana any amin'ny Repoblika Tseky